Public Health in Myanmar: တရားမျှတမှုနှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
I'm very much appreciate your opinion. We should publish this post to the public.How could we do?
ကျွန်မတော့ ထောက်ခံတယ် ဆရာမရေ။ ကျွန်မလည်း ရှေ့နေ တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေကို ဆင်ခြင်သင့် တာ အမှန်ပါဘဲ။
လက်ခံပါသည်ခင်ဗျား။ Media Bias အပေါ် အာရုံစိုက်လွန်းခြင်း မဟုတ်ပါ။ အစ်မပြောသကဲ့သို့ တောင်းဆိုမှုpost မမြင်ရသေးခင် လက်ရှိရှိနေသော Post အပေါ် အမြင်ကို ရေးသားရခြင်းပါ။ ထို post မှာ ရေးသားထားသော comment တစ်ခုပါပါသည်။ မှန်မမှန်တော့ သေချာမသိပါ။
"မနက်ဖန် ၂၆-၁၁-၁၀၀၉ မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆေးကောင်စီမှာ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ထိုင်ပြီး လိုအပ်သလို စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။" ကျွန်တော်တို့အားလုံး စောင့်ကြည့်ကြပါစို့။
ဥပမာတွေနဲ့ထောက်ပြသွားတဲ့အချက်တွေအတွက် စဉ်းစားပြီး ကိုယ်တိုင်း ပြန်သုံးသပ်စေပါတယ်
သတိမမူမိတဲ့အချက်တွေကို ပြန်သတိပြုစေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီက ရွှေဂုံတိုင်အထူးကုဆေး ခန်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်ရှာဖွေ ဖေါ်ထုတ်ဖို့ အဖွဲ့တခု ဖွဲ့ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ကြ ကြောင်း တဆင့်ကြားသိရပါတယ်။ ပဏာမ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (PE) သဘောမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စုံစမ်းမူ လုပ်တယ်ကြားရလို့ဝမ်းသာတယ်။ အခုမှလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ နောက်ကြလွန်းတယ်ထင်တယ်။ တခုတော့နားလည်ပါတယ် မတူညီတဲ့စနစ်တွေကြောင့်ပါ။ မိရိုးဖလာအရ သေရင်မြေမြှပ်ဖို့လောက်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးဆိုတာကို လူနာရှင်တွေဘက်ကသိသလို
ကျန်းမာရေးလုပ်သားများပါ အလေးထားကြတာ သိရလို့ ဝမ်းသာတယ်။ မေးခွန်းတခုမေးပါရစေ ကိုနေဦး ကျနောတို့နိုင်ငံမှာ ဒီလိုကိစ္စမဟုတ်ပဲ သာမန် လူသေမူတွေမှာ ပညာရှင်ဘက်၊ ဥပဒေဘက်က စစ်ဆေးအတည်ပြုမူတွေ ရှိ၊ မရှိ သိချင်ပါတယ်။
မ အရမ်းထိမိတဲ့ဆောင်းပါးတပုဒ်ပါ။ ညီမတို့နိုင်ငံမှာ အဲဒီလိုအသိပညာပေးဖို့တွေအများကြီး လိုအပ်နေတယ်။ ပြောပိုင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးရင်နဲ့ လူဖြစ်ရှုံးနေကြတာ။ အခြေခံရှိသင့်တဲ့ အသိပညာတွေတောင် မပြည့်စုံနိုင်ကြတော့ဘူး။ အပြင်မှာ ကျောင်းစတက်တဲ့အချိန်ကစလို့ ကိုယ်တွေမှာ ဘာတွေအားနည်းချက်တွေရှိနေလဲဆိုတာကို အရင်ကြုံရတယ်။ တခုခုဆွေးနွေးပြီဆိုရင်လည်း တခြားနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေလို ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆိုတာ၊ ထောက်ခံတာတွေလုပ်ဖို့ကို မ၀ံ့မရဲတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဆရာဆူမှာစိုးရိမ်သလိုလို၊ အားနာသလိုလို၊ ကြောက်သလိုလိုတွေဖြစ်တာ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောဖို့ အားနာတဲ့အကျင့်ကြောင့် မပြောရဲတဲ့အကျင့်တွေကြောင့် မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ကြရတယ်။ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျကျ မလေ့လာပဲ သူများဆုံးဖြတ်တာကို လက်ခံလွယ်တာလည်း အားနည်းချက်တွေပဲ။ မှန်ရင်မှန်တဲ့အတိုင်း လည်းမပြောရဲကြ၊ ယုံရင်ပုံအပ်ကြတာတွေက ပြဿနာတွေပေါ့။
ဒါကတော့ မ ပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးထဲက တချက်အနေနဲ့ ကြုံဖူးတာကိုပြောပြတာပါ။မ ရေးထားတဲ့ အချက်တွေအားလုံးကပြင်ပလောကမှာမျက်ဝါးထင်ထင်ကြုံတွေ့နေရတာမို့လို့
အဲဒါတွေအားလုံးကို ညီမတို့နိုင်ငံသားအားလုံးကို သိအောင်လုပ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေအမြန်လိုအပ်နေပြီနော်။ အားလုံးဝိုင်းလုပ်မှရမှာပါ။
i hv also postedacomment at 'presumption of innocense'. the whole public needs education to know their rights and privileges and all government and private sector services need to change their attitude towards their tax paying nationals. hope we can contribute something positive with the ongoing debate here.
အရမ်းကောင်းတဲ့ သဘောတရား တစ်ခုပါ။ မျှတပြီး တွေးခေါ်ထားတယ် လို့လဲ မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးစာကြောင်း "ဒါကြောင့် တရားမျှတမှုနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုရေးရာ ပြဿနာတွေကို တရားမျှတမှုကို အလိုရှိသူတိုင်းက မားမားမတ်မတ် ရင်ဆိုင်ရပ်တည်ဖို့ လိုအပ်လှပါကြောင်းနဲ့ ဖိနှိပ်မှုနဲ့ မတရားမှုဆိုတာ ဖိနှိပ်တာတွေ၊ မတရားတာတွေကို ခေါင်းငုံ့ခံနေသူတွေပဲ ကြုံတွေ့ရမယ့် ပြဿနာ ဖြစ်ပါကြောင်း" ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်တွင်းက မဟုတ်ဘူးလို့ဘဲ ယူဆမိတယ်။ အဲ နေရာတိုင်းမှာ အဲလို ခေါင်းငုံ့ ခံတာ မဟုတ်ရင်တောင် ဥပေက္ခာထားပြီး မသိချင်ယောင် မဆောင်နိုင်ရင် လူ့သက်တမ်းကို ဘယ်မှာ ကုန်ဆုံးမလဲ မသိနိုင်ပါဘူး။
သာမန်လူသေမှုဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုသလဲ မသိပေမယ့် ဆေးရုံတွေမှာ ဆေးရုံတက်တာ ၂၄ နာရီ မပြည့်ခင် သေဆုံးတယ်။ လူနာမှာ ထင်ရှားတဲ့ ရောဂါနောက်ကြောင်း သေဆုံးတယ်။ သေဆုံးပြီးမှ ဆေးရုံရောက်လာတဲ့ ကိစ္စတွေမှာဆိုရင် Post-Mortem examination လို့ခေါ်တဲ့ ရင်ခွဲ စစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
ဆရာမ ပြောပြပေးတဲ့အသိမျိုးလူတိုင်းမှာရှိဖို့ လိုနေပါတယ်..ကျွန်မတို့ လို လူဗိန်းတွေး က တော့ ssc မှာသေခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးကို ရက်ကွက်ထဲ က ဆရာဝန်ဆီမှာပြသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်..အနည်းဆုံးအဖြေမှန်တော့သိရမယ်..ဒီအပြင်ဆေးခန်းဆရာဝန် က သတ်မှတ်ထားတဲ့တစ်ရက်စာဆေးကုခကိုပဲသူ အလိုရှိလိမ့်မယ်..အခုလို ခြေရာကြီးမိတော့
ငွေမှငွေဖြစ်နေတဲ့ဆေးရုံလိုနေရာမှာလူနာအသက်ကို ကုတင်ပေါ်တင်ပီးအေးဓမြ တိုက်နေသလိုပါပဲ..၁၀ တန် ကုမဲ့လူနာကို ၁၀၀တန်ကုမဲ့အခြေအနေရောက်အောင်၁၀၀တန်ရောဂါကိုနာမည်တပ်လိုက်တာလား..ကျွန်မညီမလေး က ကင်ဆာရောဂါကို အဲ့ဒီဆေးရုံမှာကုရင် ၁လခွဲလောက်တတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်..သေကို သေရမှာအားလုံးကြိုသိနေခဲ့ပါတယ်..ဒါပေမဲ့သူတို့ ဆေးရုံက အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပီးဆေးရုံကမဆင်းခိုင်းပါဘူး..နယ်ကိုပြန်ရမဲ့လူနာ က သေမဲ့သေနယ်မှာပဲပြန်သေချင်ရှာတယ်..ကင်ဆာဆိုတာကို ရေရာတဲ့အဖြေ မပေးသေပဲ ၁လခွဲနီးပါးနေခိုင်းထားပီးမှ အသားစ ယုစစ်ဘာညာလုပ်ကြတယ်..ကုန်ကျစရိတ်တွေက အဖြေရဲ့ အဆုံးမှာ တက်ပီးရင်းတက်နေပီ..ကင်ဆာဆိုတာသူတို့ ကြိူုသိနေခဲ့ကြတာလူနာဆေးရုံတက်ပီး၃ပတ်လောက်ကတည်းကပါ..ကလေး က ကင်ဆာဆဲလ်တွေပြန့် နှံ့ နေပါပီ..ဆိုလိုချင်တာက ဆေးရုံ က ဟိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး ဟိုတယ်မှာ၁လနေမဲ့လူ ကို ၂လနေအောင်ဆွဲဆောင်တာအပြစ်မရှိပါဘူး..ဆေးရုံ မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပီးလူနာမိသားစုဆီက၀မ်းနည်းကြေကွဲမှု တွေနဲ့ မျက်နှာတွေကို ကြည့်ပီးအေးဓမြ တိုက်နေနိုင်တာ အံ့သြလွန်းလို့ ပါ..
thank for your reply for my qus.
and in myanmar??
Some ethics are being broken in Myanmar Journalism. Really one should be identified asasuspect before verdict even he isakiller.
It is fair not to hurt the righteous when the media touches an issue.
မှန်လိုက်လေ ဆရာမ ရယ် ၊ထိပါပေ့မိပါပေ့ ၊ဒါတွေ ကိုပြင်ရမှာပါလေ ၊ အစိုးရ၀တ်တရား နဲ့ပြည်သူ့ဝတ်တရား တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အားလုံးကဆက်နွယ်နေပါတယ်။ တစ်ခု ကျိုးရင်ကျန်တာတလည်းတစ်နွယ်ငင်တစ်စင်ပါ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေပြင်ဖို့ တကယ်လိုနေပါပြီ
Ama, you are brave. I like your post, ama.
ဆရာမ ထောက်ပြသွားတာတွေ အားလုံး အရမ်းကောင်းပါတယ်... ထောက်လဲ ထောက်ခံပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ “ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အာဏာရှင်စနစ်ကို တွန်းလှန်ချင်ကြရဲ့လား”.. ဆိုရင် ကိုယ့်ဘေးကလူတွေကိုကြည့်ပြီး.. တခါတခါ စိတ်ပျက်မိတယ်... တစ်ဦးကောင်းတစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ မပြီးနိုင်တာတွေ.. အများကြီးပါဘဲ..။
I cannot agree with the fact that doctor-patient relationship isakind of sellingaservice to consumers. You can buyamaterial, expert service or some technical knowhow. A patient comes toadoctor withadisease and the doctor sees the patient and prescribes some medicines or remedies. This is justaprocess. But outcome is variable upon so many factors (I hope you knew it).You can not get the same level of service among the same level of professionals. You can expect to harvest your own crops after certain period of time. But you can't expectacompetent doctor after graduation.It needs to sacrifice to some extent. To cut the long story short, we (doctors) are not serving the patients just to earn. And the patients should not demand his or her consumer's right like inacattle market or Car dealer's compound.
I don't agreed Soe Min opinion.